တိ SPEKE INSTALL လုပ်နည်း3- TEAMSPEAK - 2019
နှစ်ချက် Exposure တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် alignment ကို၏ထင်ယောင်ထင်မှားနှင့်အတူအခြားဖို့တစ်ခုတည်းပုံရိပ်၏စည်းကြပ်သည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုပြန်ရစ်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲရုပ်ရှင်၏တူညီသောဘောင်အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲဓာတ်ပုံဆရာတို့ကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်သစ်ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများ software ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့သုံးပြီး (Forge) နှစ်ဆထိတွေ့မှုအတုယူလို့ရပါတယ်။ Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြောထားသည်ကဲ့သို့သောရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
တစ်ရှုခင်းနှင့်အတူမိန်းကလေး၏ဤသင်ခန်းစာသဟဇာတဓာတ်ပုံ။ အပြောင်းအလဲနဲ့၏ရလဒ်ဆောင်းပါး၏ preview ကိုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာများအတွက် စတင်. ပစ္စည်းများ:
ပုံရဲ့နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့, ငါတို့နောက်ခံကနေမော်ဒယ်ခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ site ကိုပြီးသားကသင်ယူဖို့သင်ခန်းစာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် Photoshop မှာအလုပျလုပျဖို့ဘယျလို, ဤကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲမဖွစျနိုငျသညျ။
1. ကျနော်တို့ကရှုခင်း၏ရုပ်ပုံကိုရှာဖွေကာပြုပြင်နိုင်သည့်စာရွက်စာတမ်းဖို့အတွက် Photoshop Workspace ကဆွဲယူပါ။
2. ကျနော်တို့သာရှုခင်းမော်ဒယ်အတွက်ဖော်ပြရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ် ALT နှင့်အလွှာအကြား interface ပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။ အဆိုပါ cursor ဤပုံစံကိုပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ယခုရှုခင်းပုံစံ၏ကောက်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။ ဤသည်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် "Clipping မျက်နှာဖုံး".
3. စာနယ်ဇင်း key combination ကို CTRL + T ကို နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအ action ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
1. သင်ကမော်ဒယ်နှင့်အတူအလွှာကိုသွားနှင့်သော့ပေါင်းစပ်များ၏မိတ္တူကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ် CTRL + J ကို.
2. ထိုအခါအောက်ပိုင်းအလွှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ထိပ် panel ကထဲရွှေ့။
3. အထက်အလွှာများအတွက် Mode ကိုရောနှောနေခြင်းမှပြောင်းလဲသင့်တယ် "Screen".
အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘ (Display ကိုစိတျအပိုငျး) မြှင့်တင်ရန်သက်ဆိုင်သောညှိနှိုင်းမှုအလွှာဖြစ်ပါသည် "Levels နဲ့" အနည်းငယ် topsheet မိုက်။
ယင်းအလွှာအတွက် setting များအတွက် binding ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုအခါအလွှာပေါ်တွင် Layers Palette ညာဘက်ကလစ်နှိပ်သွားပါ "Levels နဲ့" နှင့်ကို item ကို select "Down ပေါင်းမည်".
brush ဖြစ်ရမည် "ဖျလှည့်လည်",
3. မျက်နှာဖုံးပေါ်ဖြစ်ခြင်းဒီအစုတ်, ကျွန်းသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, အလွှာမော်ဒယ်အတွက်ဒေသများဆေးထိုးခြင်း။
4. အဆိုပါရှုခင်းနှင့်အတူအလွှာသွားပြီးနောက်တဖန်တစ်မျက်နှာဖုံးဖန်တီးပါ။ မျက်နှာကနေ, ယေဘုယျထဲမှာ, မိန်းကလေးရဲ့လည်ပင်းပေါ်တွင်ပုံရိပ်များအကြားနယ်နိမိတ်ဖျက်ပစ်လျက်, နှာခေါင်းကနေပိုလျှံဖယ်ရှား, မျက်စိ, မေးစေ့မှတူညီဖြီး။
1. သစ်တစ်ခုအလွှာ ဖန်တီး. အောက်ခြေ panel ကိုမှရွှေ့။
2. ထိုအခါကီးဘုတ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ SHIFT + F5ထိုသို့သောအားဖြင့်ပြတင်းပေါက်ဖွင့် setting များကိုဖြည့်ပါ။ drop-down list ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "အရောင်" နှင့်အပေါ့ပါးသေံအတွက်တစ်ဦး pipette ၏ပုံစံကို ယူ. , မြှားကိုနှိပ်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ OK ကို.
သငျသညျထိပ်ပုံထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့တစ်ဦးချွန်ထက်သောနယ်နိမိတ်သည်။ တစ်ဦး tool ကိုရွေးချယ်ခြင်း "ရွှေ့",
အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် Tone နေဆဲဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းပြီးစီးပေး, ပြင်ဆင်ထားသည်။
1. ညှိနှိုင်းမှုအလွှာကိုဖန်တီး "Gradient မြေပုံ",
gradient ကို palette ထုတ်ဖော်နှင့်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဆက်စပ် menu ကို, ကို select လုပ်ပါသတ်မှတ်မည်အတွက် "ဓာတ်ပုံအသင်း Tone",
rendering အဘို့ငါပုံရိပ်မှာသတ်မှတ်ထားသော gradient ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကဟုခေါ်သည် "ရွှေနဲ့နီညိုရောင်".
2. ထိုအခါငါတို့သည် Layers palette ကိုသွားနှင့်အလွှာ၏ရောစပ် mode ကိုပြောင်းလဲစေ "Gradient မြေပုံ" အပေါ် "ဆော့ဖအလင်း".
3. ဆံပင်ပုံစံတွေ၏အောက်ခြေတွင်လည်းမိုက်မြေယာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီအရိပ်ထဲမှာအကြှနျုပျတို့သစ်တောအချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ခေါ်တော်မူသည်အခြားညှိနှိုင်းမှုအလွှာကိုဖန်တီး "Curves".
ကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်တစ်မိုက် display ကိုစိတျအပိုငျးရရှိ, တက် curve ပေါ်မှာအမှတ် ထား. , လက်ဝဲကကွေးနှင့်။
4. ညှိနှိုင်းမှုပြီးစီးပြီးနောက်, အ Layers palette ကိုသွားသည့်ခါးဆစ်ဖို့အလွှာမျက်နှာဖုံးကိုသက်ဝင်နှင့် key combination ကိုနှိပ် CTRL + I ကို။ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးအနက်ရောင်ခြယ်သပါလိမ့်မည်, နှင့်လြော့ပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
5. ထိုအခါငါတို့ကဲ့သို့ရှေ့တော်၌ထိုတူညီသောဖြီးယူပေမယ့်ဖြူ၏။ opacity ကိုဖော်ထုတ် 25 - 30%.
6. ဤအရေးစပ်သီ၏လေထုအသံတိတ်, desaturated အရောင်များ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ အဆိုပါဆုံးမခြင်းအလွှာသုံးပြီးပုံရိပ်ကို၏ရွှဲကိုလျော့ချ "Hue / Saturation".
လက်ဝဲဘက်သို့အနည်းငယ်သက်ဆိုင်ရာ slider ကိုရွှေ့ပါ။
ကျနော်တို့သာခြေလှမ်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ - ပြတ်သား။
1. အဆိုပါ uppermost အလွှာအပေါ် Turn နှင့်ပုံနှိပ်ဖြတ်လမ်းဖန်တီး Ctrl + Alt + SHFT + E ကို.
2. မီနူးမှ Go "Filter ကို - Sharpen - Unsharp Mask".
အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ထုတ်အဓိပ္ပာယ် 20%အချင်းဝက်မျဉ်း 1.0 Pix, Threshold 0.
ဒုတိယခြေလှမ်း - ဆူညံသံများထို့အပြင်။
1. လောင်းသော့ setting အသစ်တစ်ခုအလွှာများနှင့်ခေါ်ဆိုခ Create SHIFT + F5။ drop-down list ကိုခုနှစ်, ဝစွာကို select "50% မီးခိုးရောင်" OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
2. ထိုအခါ menu ကိုသွားပါ "Filter ကို - ဆူညံသံ - ဆူညံသံ Add".
ကောက်ပဲသီးနှံ "မျက်စိက" ဖျောထုတျ။ ပုံရိပ်မှာ Peeping ။
3. ပြောင်းလဲမှုကိုဤအလွှာများအတွက် blending mode ကို "ထပ်"ဒါမှမဟုတ်အပေါ် "ဆော့ဖအလင်း".
ဒီ technique ကိုမြားစှာလျှောက်ထားရန် Options များ, ကအားလုံးကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်မစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်တကွသင်နိုင်ရန်အတွက်အရာအားလုံးကိုရှိသည်သောမြော်လင့်လျက်ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ site ကူညီပေးပါမည်။